Yintoni i-LLLP-Ubambiswano oluLuxanduva lweTyala eliLingeneyo
I-LLLP liBuhlakani obuLuxanduva lweTyala loLuxanduva. Nazi iinzuzo ezimbini ezinkulu zeli qumrhu. Okokuqala, kukhusela amaqabane kwityala xa intsebenzo ityhilwe ecaleni kwetyala. Okwesibini, inika ukhuseleko lweeasethi. Oko kukuthi, xa umntu etyhola iqabane, ngokobuqu, likhusela iimpahla ngaphakathi kwintsebenziswano ekubeni zithathwe ngumntu ogweba ityala lomlingane. Ke, nokuba ulwaphulomthetho luvela ngaphakathi kwinkampani okanye ngokuthe ngqo ngqo kwiqabane, i-LLLP inokubonelela ngomqobo osemthethweni.
Olu hlobo lobambiswano lukwabonelela ngoxanduva olulinganiselweyo kumaqabane jikelele entsebenzisana encinci yamatyala. Oku akufani nentsebenziswano, apho amaqabane ngokubanzi enoxanduva ngokudibeneyo kuzo zonke iimbophelelo zentsebenziswano. Umthetho wobambiswano olulinganiselweyo kunye nemvumelwano yesivumelwano sobambiswano kuhlala kusebenza. Imbali yomthetho okhuselayo wexabiso lesethi ebonelelwa ngobuhlakani obunomda isetyenziselwa ukubonelela ngenkxaso yokhuselo lweempahla ezikhoyo emthethweni weli ziko.
Ukuseka ubuhlakani obulinganiselweyo boMbane
Kwimimandla emininzi Ubambiswano olungenamda lungabhalisa njengoBambiswano lweTyala loLuxanduva lweMiqobo. Ubambiso olunqongopheleyo lunganokuba luxanduva olulinganiselweyo ekusetyenzisweni yivoti kunye nolungiso kwintsebenziswano. Kwimimandla emininzi ubambiswano luya kuqhubeka njengeziko elifanayo lezomthetho elalikho ngaphambili.
Malunga nokubhalwa, ubambiso lweTyala eliNcinci le-Liability limited libonakalaliswa kula mazwe alandelayo:
Uninzi lwamazwe amaninzi aqala ukwamkela ubudlelwane beliTyala elinoThintelo loxanduva. Nangona iCarlifonia ingenamthetho wombuso ovumela ukwakhiwa kweCalifornia LLLP, iyayamkela iLLLPs eyenziwe phantsi kwemithetho yelinye ilizwe.
Amahlakani Jikelele anetyala elilinganayo labanini zabelo zenkampani. Ayitshintshi izibonelelo zobambiswano ezifana nerhafu yentsebenzo engafumanekiyo kulowo ubandakanyayo. Inciphisa uxanduva olunokwenzeka kwiqabane ngokubanzi.
Umthetho okhuselweyo wobuhlakani bee-asethi ubonakalisa imbali enkulu “yomthetho wamatyala” oqinisekisa ukuba iLP ibonelela ngokhuseleko lwezinto xa abanini beLP betyholwa. Nangona kunjalo, i-LP inomntu "osesiswini ngokubanzi" osengozini. "Egameni le-LLLP.
Ukwenza i-LLLP kufana nokubandakanywa. Amanqaku akhethekileyo afakwa kurhulumente welizwe. Iziphelo zezomthetho zezi zilandelayo: Intsebenzo yeXabiso elineMiqobo, iLLLP, okanye iLLLP
Olu lwazi luboniswe kule webhusayithi lenzelwe ukubonelela ngolwazi oluchanekileyo nolugunyazisiweyo kunye nenkxaso yophando malunga nomba oxutyushwe. Ibonakaliswa ngokuqonda ukuba iinkampani zihlanganisiwe ekunikezeleni ngokwasemthethweni, accounting, okanye kwezinye iingcebiso zobungcali. Ukuba ingcebiso kwezomthetho okanye olunye uncedo lweengcali luyafuneka, iinkonzo zomntu ofanelekileyo ofanelekileyo kufuneka zifunwe.